février 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vavaka ho an’ireo ananana adidy ivavahana
Andriamanitra, omeo ny fahasoavanao, ny havako, ny mpanao soa ahy, ny sakaizako sy ny fahavaloko; vonjeo ny mahatra, ny marary sy ny miala aina; tariho ho ao amin’ny Eglizinao ny…
Continuer la lecture Vavaka ho an’ireo ananana adidy ivavahana
Santionany ihany ireo fa I Jesoa koa dia nitoetra 40andro sy 40alina tany an’efitra mialohan’ny hitoriany ny Vaovao Mahafaly tamin’ny olona. (suite…)
Continuer la lecture Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Toriteny
Nalain’i Satana fanahy Izy, ary ny Anjely nanompo Azy. (suite…)
Continuer la lecture Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Tenin’Andriamanitra
Continuer la lecture JMJ Mada 2015
Manomboka ny alarobian’ny vanim-potoanan’ny karemy, koa indro atolotra antsika ny tokony ho fantatra mikasika izany, mba hisy vokany eo amin’ny fiainan’ny tsirairay ny karemy fa tsy…
Continuer la lecture KAREMY